पाइपलाइनबाट डिजेलमात्रै ल्याइने, वार्षिक ७० करोड बचत ::Nepali TV
You are here : Home News पाइपलाइनबाट डिजेलमात्रै ल्याइने, वार्षिक ७० करोड बचत
पाइपलाइनबाट डिजेलमात्रै ल्याइने, वार्षिक ७० करोड बचत
काठमाडौं । तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेको नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पहिलो चरणमा डिजेलमात्रै आयात हुने भएको छ । बजारमा डिजेलको माग उच्च रहेकाले उक्त पाइपलाइनबाट सुरुमा डिजेल आयात गरिने भएको हो । कुल पेट्रोलियम मागको ७० देखि ८० प्रतिशत डिजेलको माग रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
“पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाइ ईन्धनमा डिजेल आयातको हिस्सा धेरै छ, त्यसैले अहिले हामीले पाइपलाइनबाट डिजेलमात्रै आयात गर्न सक्यौं भनेपनि ठूलो राहत हुनेछ,” नेपाल आयाल निगमका निमित्त प्रमुख सुशील भट्टराई भन्छन्, “अहिले बजारमा माग भैरहेको डिजेलमा ८० प्रतिशत पाइपलाइनबाट आउनेछ । यतिमात्रै आउँदा पनि हामीलाई ठूलो राहत हुनेछ ।”
मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन तर सिंगल आयात
रक्सौलबाट अमलेखगञ्जसम्म जडान हुन लागेको यो पाइपलाइन मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन हो । यो पाइपलाइनबाट डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोल पनि आयात गर्न मिल्छ । तर निगमले माग बढी भएको डिजेलमात्रै आयात गर्न लागेको हो ।
“मल्टिप्रोडक्ट पाइपलाइन भएपनि एउटा प्रोडक्ट आयात गरेपछि बीचमा मट्टितेल आयात गर्नुपर्छ । अन्यथा दुई थरी पेट्रोलियम पदार्थ मिसावट हुन जान्छ । जस्तै– डिजेल आयात गरिसकेपछि पेट्रोल आयात गर्ने हो भने पेट्रोल आयात गर्नु अगाडि मट्टितेल आयात गर्नुपर्छ । डिजेल, पट्रोल र हवाइ इन्धनको सेप्रेटरका रुपमा डिजेल रहन्छ,” निमित्त प्रमुख भट्टराईले प्रष्ट्याए ।
यो पाइपलाइनबाट डिजेल र पट्रोल आयात गर्ने हो भने यी दुईको बीचमा मट्टितेल पनि अनिवार्य आयात गर्नैपर्छ । “डिजेल र पेट्रोल आयात गर्ने हो भने ती दुई प्रोडक्को बीचमा हामीले मट्टितेल पनि त्यही पाइपलाइनबाट अनिवार्य गर्नैपर्छ तर त्यसरी आयात गरिएको मट्टितल नेपालमा खपत हुँदैन,” भट्टराई भन्छन्, “सेप्रेटरको रुपमा मट्टितेल आयात गर्दा कम्तिमा नेपालमा ४ हजारदेखि ४५ सय किलोलिटर मट्टितेल आएपुग्छ । जबकी यसको आधा पनि मट्टितेलको माग छैन ।”
भविष्यमा आयात गर्न सकिन्छ
निगमका निमित्त प्रमुख भट्टराई भविष्यमा भने यही पाइपलाइनबाट मल्टिप्रोडक्ट आयात गर्न सकिने बताउँछन् । अहिलेसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम आयात गरेको अनुभव नभएको र यसको प्रयोग गर्दै दक्ष भैसकेपछि भने यसैबाट मल्टि प्रोडक्ट आयात गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर यसका लागि सेप्रेटरका रुपमा प्रयोग हुने मट्टितेल प्रयोग नगरी डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दा त्यसलाई छुट्याउने मेसिन र ट्यांकीको आवश्कता पर्नेछ ।
अहिले बन्न लागेको पाइपलाइन रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको हो । यसको लम्बाइ ३६.२८ किलोमिटर छ ।
कति हुन्छ डिजेल आयात ?
अहिले निगमले मासिक एक लाख १५ हजार केएल डिजेल आयात गर्दै आएको छ । ४० हजार केएल पेट्रोल १६ हजार के एल हवाई इन्धन र १५ सय केएल मट्टितेल आयात भैरहेको निगम निमित्त प्रमुख भट्टराई बताउँछन् ।
कति छ पाइपलाइनको आयात क्षमता ?
भारतीय पक्षले जनाएअनुसार २९४ किलोलिटर (२ लाख ९४ हजार लिटर) प्रतिघण्टा आयात गर्न सकिने छ । यो उच्च क्षमता हो । तर व्यवहारिक रुपमा भने अढाई लाखभन्दा धेरै आयात गर्न नसकिने निगमको भनाइ छ ।
सुरुमा पाइपलाइनको योजना बनाउँदा निगमले दैनिक ८ घण्टा पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा माग धान्ने अवस्था थियो । “अहिले दैनिक १६ घण्टा चलाउँदा पनि डिजेलको माग मात्रै पनि धान्न सकिने अवस्था छैन,” भट्टराईले भने । हालको मागलाई धान्न पेट्रोलियम पाइपलाइन १९ घण्टा चलाउनैपर्ने हुन्छ ।
११ मिटर लम्बाईको १० दशमलव ७५ इन्च मोटाइको माइल स्टिल एमएस पाइपबाट प्रतिघण्टा २ सय ९४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने छ ।
ढुवानी फाइदा कति ?
पाइपलाइनको प्रयोग गरेपछि वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ ढुवानी कम हुने निगमको अपेक्षा छ । ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत रहने पाइपलाइन निर्माणमा नेपालले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
करिब ५ वर्षमा नेपालले आफ्नो लगानी उठाउने निगमको विश्वास छ । पाइपलाइन तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म ग्यारेन्टी गरिन्छ ।
अरु पेट्रोलियम ट्यांक, ट्रकबाटै आयात
पेट्रोल, ग्यास, मट्टितेल हवाई इन्धन भने ट्यांक र ट्रकबाट नै निरन्तर आयात हुने भट्टराईले बताए । पाइपलाइनबाट रक्सौलबाट आमलेखगञ्जसम्म आयात हुने डिजेल पनि त्यहाँबाट यता भने ट्यांक र ट्रकबाट आयत हुनेछ ।
निगमका अनुसार अहिलेसम्म ३६ किलोमिटर नै पाइप आइसकेको छ भने करिब ३ किलोमिटर पाइप जोड्ने काम भइसकेको छ । काम सुरू भएको १५ महिनामा भारतको अमलेखगन्जस्थित डिपोमा पाइपलाइन जोडिने निगमले बताएको छ ।
सन् २०१५ को अगस्ट २४ मा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच उक्त परियोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा काम शुरू भएको २ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि नाकाबन्दीका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार पाइपलाइन परियोजनाको शनिबार शिलान्यास गरेका थिए । भारतीय आयल निगमले १५ किलोमिटर पाइप बिच्छ्याउन तयार पारिसकेको छ । मोतीहारी–रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन ३२ दशमलव ७८ किलोमिटर रहेको छ भने रक्सौल–अम्लेखगन्ज भने ३६ दशमलव २८ किलोमिटर छ । परियोजनाले एक वर्षभित्र पूर्णता पाउने दाबी गरिएको छ ।